Microsoft Dynamics 365 | Isku-dubaridka CRM & ERP - Iskuulka ITS Tech
Maxay tahay Dynamics 365?
Habka Xogta Guud
Isdhexgalka Xafiiska 365
Qiime intee le'eg ayuu u yahay Microsoft Dynamics 365?
Ganacsatada maanta waxay raadinayaan dhibaatooyin waxayna diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan isbedelka digital. Labada ururba iyo ururada waaweyn ayaa ka faa'iideysanaya qaab-dhismeedyadaas oo fududaynaya mid kasta oo ka mid ah hawlgalkooda si sahlan si ay u xoojiyaan aragtida ganacsiga ee muhiimka ah si ay wax uga qabtaan. Isbedelka ka mid ah isbeddelka digital-ka ee la filayo ee xaaladaha hadda jira waa Microsoft Dynamics 365.
Iyada oo Microsoft Microsoft Dynamics 365, oo mid kasta oo ka mid ah gumeysiga ayaa dhammaaday. Isku dheelitirnaanta isbeddelka dijital ah, Microsoft Dynamics 365 wuxuu filayaa in uu ka caawiyo ganacsiyada CRM (Maareynta Xiriirka Macaamiisha) ama ERP (Qorshaha Khayraadka Ganacsiga), waliba labada isku darka labadaba. Dynamics 365 waa aasaas udubdhexaadin ah ERP iyo CRM qaabka loogu talagalay loogu talagalay is waafajinta ugu weyn iyo xalalka dib loo furo.
Microsoft Dynamics 365 waxaa loo shaqeeyaa si loo siiyo marxalado ku saabsan ururada, marka hore, hawlahooda. Waxay ku duusho nidaamka ganacsigaaga si ay ugu haboonaato xaaladdeeda gaarka ah iyo dhismaha. Xagal yar, waxaad heli doontaa xal khaas ah oo aad uga baahan tahay Microsoft AppSource.
Waxaa loo adeegsaday magaca code - Madeira. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sababo yar oo la soo saaro codsiyo kuwaas oo gacan ka geysanaya oo kormeeraya awoodaha kala duwan ee kala duwan sida howlgalada, bandhigida, dhaqaalaha, heshiisyada faa'idooyinka beeraha, kordhinta otomaatiga faa'iidada iyo macaamiisha. Waxay ku magacaaban yihiin Dynamics 365 ee Hawlaha, Dynamics 365 ee Adeegyada Maareynta, Dynamics 365 ee iibinta, Dynamics 365 ee Adeegga Mashruuca Mashruuca iyo Dynamics 365 ee Adeegyada Macaamiisha.
Microsoft Dynamics 365 wuxuu leeyahay habka macluumaadka caadiga ah kaas oo bixiya isdhexgalka xooggan ee Xafiiska Microsoft 365 iyo codsiyada ganacsiga kala duwan oo leh hay'ad hay'adeed. Cortana Intelligence, Power BI iyo Internet of Things waa mid ka mid ah xarun qayb ka mid ah Microsoft Dynamics 365. Halkan. macaamiishu waxay u ekaan karaan codsiyada dukaanka kale - Microsoft AppSource.
Microsoft Dynamics 365 wuxuu leeyahay isdhexgal siman leh Xafiiska 365, gaar ahaan Muuqaalka. Waxaad si toos ah u diri kartaa diiwaanka, warbixinnada iyo dalbashada Muuqaalka. Sidoo kale waad isbeddeli kartaa oo aad wax ka badali kartaa diiwaanka adiga oo aan ka bixin macaamilka emailka. Waxaad sidoo kale arki kartaa dukumiinti la xidhiidha, xaaladaha xisaabaadka ee dhammaan ka-faa'iideystayaasha ku yaal bartanka markaad fariisinayso macaamiisha badan. Qaybaha isbarbar-dhigga ah ayaa is-dhex-galku ka dhigayaa mid aan caadi ahayn.
Waxaa jira laba nooc oo ka mid ah Microsoft Dynamics 365, Ganacsiga iyo Ganacsiga Ganacsiga. Haddii ay dhacdo in ururradaadu leeyihiin wax ka badan macaamiisha 250, Enterprise Edition waxay ku habboonyihiin ururkaaga. Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah, haddii ururkaagu leeyahay agagaarka 10 ee macaamiisha 250, bixinta ganacsiga ayaa u adeegi doonta baahidaada. Maaddaama Ganacsiga Ganacsi ahaaneed uu kudhow yahay ururada yaryar, ayaa sidan ku dareysa Dynamics 365 dhaqaale ahaan. Nidaamka ganacsiga, Hawlgallada 365 waxaa la bixiyaa maalgeliyana maahan.
Macaamiisha dhameystiran, Ganacsiga Ganacsi u oggolaanaya waa $ 50 qofkiiba bil walba. Macaamiisha iftiinka ah ayaa faa'iido u leh $ 5, qofkiiba bil walba. Inkasta oo Enterprise Edition ay ka timid laba qorshe - diyaarin 1 waxaa ku jira mid kasta oo ka mid ah xaglaha marka laga reebo Hawlgallada. Waxaa lagu qiimeeyaa $ 115 bil walba macmiilka. Qorshaha 2 wuxuu ku darayaa wax walba oo ku jira Hawlgallada waxaana lagu qiimeeyaa $ 210 markay tahay bil walba. Macaamiisha iftiinka ah waxay ka faa'iideysan karaan $ 10 qofkiiba bil walba.
Tani waxay si weyn u xayeysiisay 'isbeddelka digital' waa mid aad u wanaagsan in la beddelo labadaba Maareynta Xiriirka Macaamiisha iyo Qorsheynta Khayraadka Ganacsi ee Ururada. Horumarinta ayaa ah mid aan macquul aheyn wax xiiso leh iyo wax ay isha ku hayaan. Muuqaaladii hore ee CRM iyo ERP weli waa ay joogaan inta badan taageerada iyo horumarka dhow.